Venezoela: Samuel Villegas Sy Ny Bokiny Farany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Febroary 2018 3:23 GMT
(Fanamarihana:lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2008)
Samuel Villegas, Venezoelana mpanoratra noderaina, izay matetika ny anarany no voatonona eo anilan'ny an'ireo mpanoratra fanta-daza hafa (toa an-dry Jesús Enrique Guédez [es], Arnaldo Acosta Bello, Ángel Acevedo ary Rafael Cadenas [es]), tsy ela akory izay no nalevina izy taorian'ny taona maro nakàny aina noho ny tsy fahasalamana. Andro vitsivitsy nialohan'ny nahalasanany, nomem-boninahitra farany izy ary namoaka ny bokiny farany indrindra, Muros del Sol (The Sun's Walls) tao amin'ny hopitaly niaraka tamin'ireo namany, izay nanao fikarakarana tsotra, saingy tena nampihetsi-po.
Ho tsaroana noho ny tononkalony sy ireo asa hafa izay nanomezany fomba fijery mikasika ny kolontsaina sy fanabeazana tao Venezoela i Villegas. Kanefa, na nanao ny asany tamin'ny fanaparitahana ireo vaovao aza ireo media, nanokarana'ireo blaogera sasantsasany andalana vitsivitsy ho an'ny mpanoratra iray niaina ireo androny farany. Nalevina niaraka taminà raozy maro tao amin'ny iray amin'ireo fasana tena mahantra indrindra tao an-tanàna, voahodidin'ny fahanginana malefaka, i Villegas.
Milaza i Julia Márquez Otero avy amin'ny Letras en la Red [es] hoe:
Mampiseho an'i Muros del Sol niaraka taminà asa matotra iray notanterahany i Villegas, niaraka taminà andininy matotra izay niroborobo nandritra ireo taompolon'ny fanehoana tononkalo. Namoaka ny asany voalohany La señal del primer hombre, i Villegas tamin'ny taona 1959. Nanomboka hatreo, nanaraka ny endrika kanto ny asa sorany nefa tsy mamela ny fisainana ara-tsosialy tsy ho ao anatin'ireo boky sy ireo tantara fohy toy ny Príncipe caído príncipe y El loro que mentía (Ilay Printsy Lavo sy Ilay Boloky Fandaingàna).
Noho izany, mety ho azo raisina ho toy ny tsy manantsiny (na habaka voafafa tsy ho amin'ny toerana nipoirany voalohany indrindra) ho an'ny fihaonana eo amin'ny mpamaky sy ny tontolo ireo tononkalo 310 nosoratan'i Villegas, raha vao nankalazaina. Tsarovy fa tsy misy hazo maniry ao ambany hazo iray hafa / Avelao ny Avaratra ho any Avaratra / Ary tsarovy fa: ato Atsimo ianao izao, Latina, ao ambany.
Mitsiky amin'ireo izay miahiahy sy mamely azy ilay mpanoratra ary dia mamely ny mpamaky izany: Tsy mino an'Andriamanitra aho / Hoy aho / Ary nitsiky tam-pitiavana Andriamanitra / Tondraka tampoka ireo reniranoko ao anatiko. Ny nalahelo ny lasany izy, mifanohitra amin'izany, averiny izany mba hankao anatin'ireo fampitandremana nahantony isan'andininy . Tsy misy azo averina hitsangana intsony / tsy misy ireo teny very / manondro tsy misy tomika mankany amin'ny lasa.
Mitsikera mikasika ilay boky vaovao i Iván R. Méndez tao anatin'ny blaogy CCS (Caracas):
Ao Muros del Sol, entin'i Villegas isika ho amina tontolo vita aminà bokikely misy ireo tononkalo maherin'ny 300 izay mivezivezy manodidina an'ireo lohahevitra tsy misy hakàna aina. Nandeha mahitsy ho amina hevidehibe iray i Julia Marquez raha nilaza fa “azo vakiana ao anatinà fandaharam-potoana roa ambiny folo voatsinjara tsara io asa io, izay mety hahatsapàna ny tosidràn'ny mpamaky rehefa miatrika ireo teny izay tsy nomena fahafahana ny ho gejaina na ho ariana. Fahafinaretana rano iray entin’ ireo teny voasoratra io.”
Manome topimaso iray mahaliana mikasika ny tsy fahampiam-baovao momba an'i Villegas i Luis Carlos Díaz, blaogera sady mpanoratra ato amin'ny GV :
Misy kely fotsiny, vaovao tena kely tety anaty tambajotra tamin'ity herinandro lasa ity momba ny fahafatesan'ny poety Samuel Villegas. Niandry andro maro izahay mba hijerena raha toa ny tontolon'ny blaogy mikasika ny literatiora eto Venezoela mba hiresaka zavatra mikasika an'io, saingy asa kely zara raha nisy no hitanay. Tsy voarakitra akory anaty Wikipedia ny anarany. Sahala amin'ny hoe fotoana hafa no nisy azy ary sahala amin'ny hoe tsy nandalo tao anatin'ny orinasam-baovao akory ireo teniny. Vaovao firy no tsy hita eto? Misy tsy fahampiana fahatsapàna mikasika ny firaiketana izay antsika ho ao anaty Aterineto.
Andro vitsivitsy taorian'ny fanolorana ilay bokiny farany teo am-pandriana fony izy naka aina, dia maty teo amin'ny faha-75 taonany ilay poety. Afaka nojerena tao amin'ilay Gazety Tal cual ny fanamarihana ny fahafatesany izay nanaovan'izy ireo veloma azy miaraka taminà raozy.